အိုက်ဇောလ်ရောက် မြန်မာယက္ကန်းသမားတဦးနဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း |
May 15, 2012 by khonumthungburmese
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် ယက္ကန်းခတ်ရင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ ယက္ကန်းသမားများ စတင်ရောက်လာသည်မှာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပင်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိယက္ကန်းသမားများ၏ အခြေအနေ၊ ပြသာနာများ နှင့် အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များကို တင်ပြနိုင်ရန် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက နေထိုင်ခဲ့သူ ဦးမောင်ဆန်းကို ခိုနူမ်းထုန်သတင်းဌါနက အခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်မြို့နယ်ကနေ လာသလဲ?
ခိုနှူုမ်းထုန်။ ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မီဇီုရမ်ပြည်နယ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တာများတယ်လို့သိရတယ်။ ဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာပြည်ကနေ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို ယက္ကန်းခတ်ဖို့ တက်လာတဲ့ ယက္ကန်းသမား တွေ ရောရှိလား?
ကိုမောင် ။ ။ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ အယောက် ၃၀ ဦး ၂ သုတ်လောက်ရောက် လာတယ်။ အခြား ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပေ့ါ။ သင်္ကြန်ပြီးနောက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို ယက္ကန်းခတ်ဖို့ တက်လာတဲ့သူ ၈၀ ဦး ကျော် ရှိပြီ။